Accountant | Hotel Yangon ﻿
4.7.2019, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
ကုမ္ပဏီ: Hotel Yangon
•	Able to handle the Government Tax report
•	B. Com, and related Diploma (or) ACCA,CPA, LCCI III
•	Must have good Microsoft office skill
အလုပ်တည်နေရာ No. 91/93, Corner of Pyay Road & Kabaraye Pagoda Road, 8th Mile Junction, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
9 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
11 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
55 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Social Care jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
56 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
216 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
235 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
263 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
272 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
285 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
300 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
312 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
369 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
373 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
390 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
397 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
408 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
411 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Hospitality / Hotel
Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Hotel Yangon Accountancy Jobs Accountancy Jobs Accountant မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ